कुम्भकर्ण माओवादी नेताका नाममा खुला पत्र – Everest Dainik – News from Nepal
कुम्भकर्ण माओवादी नेताका नाममा खुला पत्र
माओवादीले चुनाव किन हार्यो ? यहाँहरुका आ–आफ्नै समीक्षा छन्, तर्क छन्, अनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकौं बहाना पनि । तर, जनता र शुभेच्छुक तपाईहरुको तर्क र बहानासँग सहमत छैनन् । सधैंझैं यसपटकको पार्टी बैठकमा पनि अरु सबै खराब र आफू असल भएको दलिलसहित समीक्षा रिपोर्ट राख्नुभएकै होला । तर, यसले माओवादी बन्दैन भन्ने कुरा यसपटक पनि भुसुक्कै बिर्सिनु भएजस्तो लाग्यो । तपाईले भनेजस्तै माओवादीसँग पैसा नभएर चुनाव हारेको हो ? तपाईले भनेजस्तै जनतामा राजनीतिक चेतना भएर एमाले–कांग्रेसले जिते ? तपाईको दलिलझैं चुनावमा आर्थिक चलखेल नै निर्वाचन परिणामको सम्पूर्ण कारण हो ? यसो गम्छु, मन मान्दैन । माओवादी हार्नुमा अरु कसैको दोष नभएर मस्त निद्रामा सुत्ने कुम्भकर्ण नेताहरुको दोष छ भन्ने म बबुरा शुभेच्छुकको ठम्याई छ ।
अरु पार्टीलाई चुनाव २ वर्षअघि लाग्छ । तर, तपाईहरुलाई २ महिना अघिसम्म पनि चुनावी हावाले छुँदैन । अघिल्लो वर्ष निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्दै थियो, एमाले, कांग्रेसका नेताहरु गाउँ–गाउँ पसेर आफ्नो समर्थकलाई निर्वाचन कार्यालयसम्म ल्याउँदै थिए । उनीहरु आयोगको ‘कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन्’ नारालाई व्यवहारमै लागु गरेका थिए । तर, त्यही बेला तपाईहरु गुट बनाउन र पार्टी बैठकहरुमा कुर्सी हान्नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । आफ्ना समर्थकलाई सदरमुकामसम्म ल्याउने त्यो लफडा किन गर्नु ? तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो, ‘माओवादी भन्दा राम्रो पार्टी कोही छ ? जनताले माओवादीलाई भोट नहालेर कसलाई हाल्छन् ?’ तपाईहरुमा एक प्रकारको दम्भ थियो । तर, जनताले दम्भ चिन्दैनथे र चिनेनन् । निर्वाचनले चार बल्र्याङ खाएपछि नि तपाईहरुको चेत खुलेन, बरु जनता गणेशमानले भनेझैं ‘भेडा नै रहेछन्’ भन्ने अन्तर्मनले निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
हिजो तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामी जनताका नोकर हौं, जनताको सेवा नै हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हो ।’ तर, अहिले तपाईहरुको अन्तर्मनले त्यसो भन्दैन । तपाईको लक्ष्य न साम्यवाद छ, न जनताको सेवा नै । आफ्ना अमूक स्वार्थ पूर्तिका लागि सर्वहारा वर्गको हबला चाहीँ दिई नै रहनुहुनेछ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग हेक्का छ । तर, सर्वहारा वर्गप्रति प्रेम होइन, एक प्रकारको घृणाभाव तपाईहरुमा जाग्छ भन्नुपर्दा मन अमिलो हुन्छ । शहरका तारे होटलमा छिरेपछि तपाईहरुको दिनचर्या फेरिएको छ । सुगुरको खोर सफा गर्न आउनुभएका तपाईहरु आफै सुगुरजस्तै देखिँदा पनि कुनै फिक्री छैन । यसले तपाईहरुलाई भन्दा बढ्दा सूर्ता हामीलाई परिरहेको छ ।
नेतागण, तपाईहरुलाई थाहा छ ? कांग्रेस र एमालेभित्र पनि गुट छ । मत मतान्तर त्यहाँ पनि भइरहन्छ । तर, तपाईहरुको जस्तो यदुवंशी लडाई त्यहाँ गर्दैनन् । उनीहरु हरेक कुरालाई विधिसम्मत छिनोफानो गर्छन्, पद्दतिको पालना गर्छन् । भित्र मारामार गर्छन् । तर, बाहिर एकले अर्काको राम्रोसँग संरक्षण गर्छन् । उनीहरुलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि जतिसुकै दुश्मन भएपनि अन्तिममा पार्टीकै मान्छे काम लाग्छ । तर, तपाईहरुको सोच्ने तरीका बिल्कूलै उल्टो छ । तपाईहरु, आफ्ना सिध्याउन अरुको बैशाखी टेक्नुहुन्छ । वर्गबैरीको काखमा बसेर मित्रको मुटुमा छुरा धस्नुहुन्छ । अनि, यो सबै राम्रैसँग हिसाब गरेको विरोधीले तपाईलाई कसरी नेता मान्ला ?
तपाईहरु पार्टीका सिसिएम, पिबिएम, स्थायी समिति सदस्य, पदाधिकारी के–के पदमा हुनुहुन्छ । तर, तपाईहरुको कद देखेर दया लाग्छ । ३९९९ सिसिएममध्ये करिब ३५०० जना त कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य र एमालेको जनवर्गीय संगठनको सदस्य जति पनि हैसियत राख्नुहुन्न । एकाध नेताहरु असल, इमान्दार र मेघावी पक्कै छन् । तर, ३९९९ को थुप्रोभित्र उहाँहरुले आफ्नो इमान्दारिता र क्षमताको प्रयोग गर्ने अवसर बिरलै पाउनुहुन्छ । काम गर्नेहरुको पनि कुम्भभेला र कुम्भमेला देखेर जाँगर हराउँछ । यसपालिको चुनावमा पक्कै महशुस गर्नुभयो होला, हाम्रा पिबिएमसँग एमालेका गाउँ कमिटी सदस्य चुनाव लडे र भारी मतले विजयी भए । तर, तपाईहरु अझै पार्टीमा बढुवा नभएकोमा गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ । सचिवालय बैठकले २ अंकको केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेपछि सायद निद्रा पनि लाग्न छोड्यो होला । तर, पदअनुसारको कद खै ? मान्छे केन्द्रीय नेता भएर वडामा १० मतमा चित्त बुझाउनुपर्दा यहाँलाई आत्मग्लानी हुँदैन ?
जतिबेला २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै थियो, त्यतिबेला माओवादी नेताहरु गाउँ र दुरदराजमा थिए । तर, समय फेरियो, कार्यनीतिक स्थानान्तरण र जीतको उन्मादले तपाईहरुको कार्यशैली र प्रवृत्ति फेरियो । २०६४ को निर्वाचनमा बल्र्याङ् खाएका एमाले–कांग्रेसका नेताहरु २०७० सम्म आउँदा धुलो टक्टकाउँदै उठे र दगुरे । तर, तपाईहरुको चेत खुलेन । अझैसम्म मस्त निद्राबाट नब्युझिँदा कार्यकर्ता र शुभेच्छुक आकूलब्याकूल छ । अहिले एमाले–कांग्रेसका नेताहरु जनयुद्धका आधारबस्ती गाउँ–गाउँ छिरेका छन् । तर, तपाईहरुलाई शहर छिरेपछि गाउँ पाखे लाग्न थालेका छन् । डोटीको जिल्ला पार्टीको बैठक काठमाडौंमै बसेर चलाउनु हुन्छ । अनि, एमाले–कांग्रेसले नजितेर कसले जित्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको एक गतिशील दस्ता हो । यो कुनै मौसमी संगठन होइन ।
तर, तपाईहरुलाई जनताले सदाबहार नेता ठान्दैनन् । तपाईहरुको कार्यक्षेत्र दार्चुला छ । तर, डेरा काठमाडौंमा हुन्छ । मान्छे मर्छ, मलामी जानु तपाईको दायित्वभित्र पर्दैन । कार्यकर्ता, शुभचिन्तक समस्यामा पर्छन्, तपाईबाट सहानुभूति पाउँदैनन् । फोन गर्छन्, सकभर उठाउनु हुन्न, झुक्किएर उठाई हाल्नुभयो भने कार्यकर्ताले हौसला पाउँदैन, गाली पाउँछ वा अनेक बहाना बनाएर तर्कनुहुन्छ । छ महिनामा एक दिन जिल्ला झर्नुभयो भने पहिलो काम गुट बनाउने हुन्छ । पार्टीको बैठक बस्नुहुन्छ । तर, सकूर्लर पनि नबन्दै काठमाडौं टाप ठोक्नुहुन्छ । न्याय सम्पादनमा न्यायले जित्दैन, प्रलोभनले जित्छ । विकास निर्माणका काममा अग्रसरता लिनुहुन्न । बरु, चन्दाका लागि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ । अनि, पार्टी कसरी बन्छ कमरेड ?
पार्टीका सबै नेता खराब छैनन् ।
आज माओवादी केन्द्र छ त अध्यक्ष प्रचण्डदेखि केही इमान्दार नेता र लाखौं जुझारु कार्यकर्ताका कारणले छ । उनीहरु पार्टीका बारेमा सोच्छन्, सम्पूर्ण शक्ति पार्टीकै लागि लगाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत नेता कुम्भकर्ण भएपछि प्रचण्ड र केही नेताहरुको वुद्धि, बर्कतले के नै पो गर्न सक्छ र ? आखिर, माओवादीमा त्यही भइरहेछ । अहिलेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि फेरि त्यही छेपारोको कथा हुने हो कि ? हामीलाई गहिरो सूर्ता छ । विगतमा गुट बनाउन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न, एकले अर्काको चरित्रहत्या गर्न जति शक्ति खर्चनुभयो, त्यति शक्ति संगठन निर्माण र जनसेवामा लगाएर हेर्नुस् त, माओवादी कहाँ पुग्दो रहेछ ?
नेतागण, माओवादी पार्टी बन्न धेरै केही गर्नु नै पर्दैन, पार्टी र देशका लागि प्रचण्ड जति खट्छन्, तपाईहरु सबै नेता आफ्नो जिम्मेवारी र औकातअनुसार त्यसको १० प्रतिशत मात्र खटिदा पुग्छ । तपाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्दा पुग्छ । जनताको दैनिक समस्या र काममा नङ र मासुको सम्बन्ध बनाउँदा पुग्छ । के तपाईहरु पार्टी कार्यक्षेत्र छोडेर राजधानी र ठूला शहरमा रमाउने, जिल्ला र समर्थकसम्म आफ्नो स्वार्थसमूह बनाउने, स–साना कामका लागि अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्ने, पार्टी काम छोडेर कुम्भकर्णझैं मस्त निद्रामा सुत्ने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने र जनतालाई रैति सम्झने संस्कार बदल्न तयार हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने मात्रै माओवादी पार्टी रुपान्तरण भएर पहिलो पार्टी बन्नेछ, अन्यथा, प्रचण्ड, अनन्त, प्रभाकरजस्ता केही नेताले मात्रै यो पार्टी सधैं जोगाउन सक्ने छैनन्, बेलैमा चेतना होस् ।
१४ श्रावण २०७४
ट्याग्स: maoist center
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अध्यक्षमा भट्टराई मनोनित
स्टार क्रिकेटर पोलार्डको सुन्दर परिवार (तस्बिरसहित)
राजधानी तोकिएसँगै मन्त्रालयका लागि जग्गा खोजी तीव्र
कार्टुन क्रूजका सरोज–आश्मा र वर्षा राउतको ‘डलर’ सार्वजनिक
जनपत्रकार संगठनको नेतृत्वप्रति फैलाएको भ्रममा नपर्न नेकपाको अनुरोध
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रदेशसभा सदस्य र पूर्व नगरप्रमुखको निधनमा दुःख व्यक्त
बैंकहरु नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्नुपर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा
पर्यटकको पूर्णसुरक्षा सरकारले गर्छः मन्त्री भट्टराई